Abarhwebi abaziNtengiso kwezeNtlalontle ukuze ufumane INZUZO Ephezulu! Ngomhla wama-2022
Funda ngesiKhokelo sesi-2 soRhwebo ngo-2022 kuRhwebo loLuntu!
Urhwebo lwentlalo yinto entsha kwindawo yotyalo-mali kwi-Intanethi. Ngamafutshane, abathengisi abakwi-Intanethi abaxhasa amanqaku ezorhwebo ekuvumela ukuba ubandakanyeke nabanye abathengisi besiza. Oku ke kukuvumela ukuba uxoxe ngamathuba okuthengisa anokubakho noogxa bakho, kwaye ufunde kwaye uphucule ulwazi lwakho lotyalo-mali.
Amanye amaqonga otyalo-mali kurhwebo lwentlalo ahamba inyathelo elinye, ngokukuvumela ukuba ukope ukuthengisa kwabanye abasebenzisi. Ngokwenza njalo, uya kuma ethubeni okufumana umvuzo ngaphandle kokuba ufuna ukuphakamisa umnwe.
Ngaba uyakuthanda ukufumana okungakumbi malunga nokuthengisa kwezentlalo? Ukuba kunjalo, siyakwamkela ukuba ufunde isiKhokelo esiFundwayo soRhwebo sesi-2 kuRhwebo loLuntu. Asigcini nje ngokugubungela i-ins kunye nokuphuma kwendlela urhwebo lwentlalo olusebenza ngayo, kodwa sixoxa ngamaqonga alungileyo asebenzayo kwintengiso.
Phawula: Khumbula nje, nangona amalungu eqonga lokurhweba kwezentlalo anokuthi ayayazi into ayithethayo, kuya kufuneka uhlale uthatha iingcebiso zomntu wesithathu ngepinki yetyuwa. Endaweni yoko, kufuneka ugxininise kumalungu anerekhodi eqinisekisiweyo ekwenzeni iinzuzo zexesha elide!
Iipesenti ezingama-71 zeeakhawunti zotyalo mali zilahleka xa kuthengiswa iiCFD kunye nalo mboneleli.
ndwendwela eightcap ngoku
Yintoni ukuThengiswa kweNtlalo?
Njengoko igama libonisa, urhwebo lwasentlalweni luhlobo lwe yorhwebo ntengiso evumela ukuba 'unxibelelane' namanye amalungu esiza. Ngale nto, sithetha ukuba uza kuxoxa ngezimvo zorhwebo ezinokubakho nabanye abasebenzisi beqonga elifanayo labarhwebi, ingxelo nganye nganye enikwe uluntu.
Umzekelo, masithi unomdla kurhwebo ioyile. Ngokuhamba ngaphezulu kwecandelo leoyile lomthengisi, uya kuthi ujonge iingcinga kunye neembono zendlela amanye amalungu acinga ngayo ukuba iimakethi ziya kuhamba. Ngenye indlela, unokuthatha isigqibo sokunika uluvo lwakho kwimakethi yeoyile, ethi yona iphinde ibone amanye amalungu ephendula.
Ngokubalulekileyo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba indawo zentengiso zentlalontle azikho nje iiforamu ezikwi-intanethi ezikuvumela ukuba uxoxe ngezimvo zorhwebo. Ngokuchasene noko, zizonke iindawo zokuthengisa ezikuvumela ukuba uthenge, uthengise, kwaye urhwebe amawaka eeasethi. Ngapha koko, esi sisiseko esiphambili seqonga, kunye nenqaku lokurhweba eluntwini elongezelelweyo kwimizamo yakho yorhwebo.
Inqaku elongeziweyo ekufuneka liqatshelwe kwingxoxo yorhwebo lwentlalo kukuba amanye amaqonga axhasa ukuthengisa ikopi. Kulapho ufumana khona ukulinganisa urhwebo lwabanye abasebenzisi kwindawo efana nezinto ezinje. Unokukhetha ukuba ngabaphi abatyali mali ofuna ukubabuyisa, kunye nokuba zeziphi izinto ofuna ukuzabela ipotifoliyo.
Iinkonzo kunye neengozi zoRhwebo loLuntu
Xoxa ngezimvo zotyalo-mali nabanye abathengisi beqonga
Funda kwaye uphucule ulwazi lwakho lokuthengisa
Thetha nabarhwebi abaziingcali abanerekhodi engaguqukiyo yokwenza inzuzo
Mirror urhwebo lwabanye abatyali mali ngokuThengisa ngeKopi
Ngaphezulu kwento yentlalo, unokufikelela ngokuthe ngqo kumawakawaka ezixhobo zemali
Iindawo zokurhweba ngokwasentlalweni zihlala zixhasa idebhithi / ikhadi lamatyala kunye neentlawulo ze-e-wallet
Kulula ukuphenjelelwa ngabo babizwa ngokuba ngabarhwebi abaziingcali
Akukho siqinisekiso sokuba iqonga lokuthengisa kwezentlalo liya kuphucula izakhono zakho zotyalo-mali
Uninzi lweengcebiso ezimbi ezijikelezayo
UkuSebenza kweNtlalo kusebenza njani?
Okokuqala nokuphambili-kwaye njengoko besitshilo ngokufutshane ngaphambili, eyona njongo iphambili yendawo yentengiso yentlalo iyafana nayo nayiphi na iqonga lotyalo-mali - ukhona ukuze wenze imali. Ngamanye amagama, kuyakufuneka uvule iakhawunti kunye nomthengisi okwi-Intanethi, ulayishe isazisi esithile, ufake imali, emva koko ukhethe utyalomali lwakho ngesiseko se-DIY.
Ngale nto ithethwayo, uya kuthi emva koko ube nenxalenye yentlalo yeqonga oza kusuka kulo. Ngethemba, oku kuyakukubumba ube ngumrhwebi ojikeleze konke kwaye uncede uthathe utyalo-mali lwakho ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Iiprofayili zoRhwebo loLuntu
Eyona ndlela ilula yokwenza ukuba intloko yakho ijikeleze urhwebo lwentlalo kukucinga ngendlela iqonga losasazo lwasentlalweni elinje nge-Facebook. Njengoko uyazi, yonke into iyinto kawonke wonke ngaphandle kokuba uthetha nomntu ngeqonga labucala labathunywa. Oku kubandakanya ukubanakho ukucofa kwiprofayile yomntu kwaye ufumane ulwazi ngakumbi malunga nabo.
Kwimeko yeqonga lokurhweba eluntwini, ngaphandle kokuba uthatha isigqibo sokugcina iprofayili yakho iyimfihlo, amanye amalungu esiza abone imisebenzi yakho yotyalo-mali. Oku kulungile kuwe njengomtyali mali we-newbie, njengoko ufumana ukuphonononga ukuba yeyiphi na impahla abathengisi abanamava abayithengayo nabathengisayo.
Uhlobo lolwazi oya kuthi ube yimfihlo ukuba lubandakanye:
Igama lomsebenzisi lomrhwebi (akukho lwazi lomntu)
Iziphumo zorhwebo zembali
Ngokuchitha ixesha ujonga iprofayili yomntu ngamnye, uya kuvavanya ukuba uphumelele kangakanani umrhwebi.
Ukufumana abaThengisi beNgcali
Indawo yotyalo-mali ekwi-Intanethi igcwele kakhulu ebizwa ngokuba 'ngabarhwebi abaziingcali'. Inyani yile yokuba uninzi lwezi 'ngcali' alunazo kwaphela iingcali konke konke. Ngokuqhelekileyo, kuya kuba nzima ukuvavanya ukuthembeka kwe-guru yorhwebo kwi-Intanethi. Umzekelo, amaxesha ngamaxesha sithengisa abatyali mali kwi-Instagram nakwiYouTube ngokulandela izinto ngobuninzi, kuphela ukuze sazi ukuba abaphumelelanga njengoko kubonakala ngathi.
Iindaba ezimnandi zezokuba amaqonga orhwebo kwezentlalo abala 100%. Umzekelo, kufuneka uphonononge urhwebo ngalunye olwenziwe ngumsebenzisi okoko wajoyina iqonga. Olu lwazi alunakulungiswa okanye lwenziwe ngumrhwebi, njengoko idatha isekwe kwimisebenzi yokuthengisa yokwenyani. Kananjalo, ungaluqhekeza ulwazi lube ziingxelo ekulula ukuzifunda, ezikuvumela ukuba ulinganise ukuba uphumelele kangakanani na umrhwebi.
Nje ukuba ufumene umrhwebi oyithandayo inkangeleko, ungabongeza kuluhlu lwabahlobo bakho - njengoko ubunokwenza nge-Facebook okanye ku-Twitter. Emva koko, ungagcina iithebhu kuyo yonke into abayenzayo eqongeni!. Oku kubandakanya ukuthengisa okuqhubekayo, kunye nawaphi na amagqabantshintshi abawathumela kwiforum yoluntu.
Iindawo zokurhweba kwezentlalo zikwalungele ukulinganisa uluvo ngokubanzi kwiiklasi ezithile zeasethi. Thatha i-eToro njengomzekelo ophambili. Iqonga elikwi-Intanethi likunika ipesenti yokuchithwa kwemali apho iya khona kwindawo yayo. Oku kuluncedo olusisiseko, ngakumbi xa ucinga ukuba i-eToro likhaya labarhwebi abangaphezu kwezigidi ezili-12.
Umzekelo, masithi uzama ukuvavanya ulwalathiso lwexesha elincinci lwegolide. Ukuba indawo yentengiso yentlalontle ithi i-97% yemali ibekwa kwii-odolo zokuthengisa, ke uyazi ukuba uluvo luphela igolide i-bearish kakhulu. Ngale nto ithethwayo, oochwephesha eqongeni banokuya ngokuchasene neemvakalelo zentengiso ngokubeka i-oda yokuthenga!
Sizithanda kakhulu iingxoxo zoluntu ozifumana kwiindawo zokurhweba ekuhlaleni. Oku kukuvumela ukuba uthethe nabanye abathengisi eqongeni, ngombono wokufumana indlela abantu abacinga ngayo ukuba iimarike zihamba. Umzekelo, masithi unomdla wokurhweba Iimpahla zeapile.
Ngokuya ngaphezulu kwiphepha lokurhweba, uya kubona intambo yeengxoxo. Oku akubonakali kwahlukile kumsonto ku-Facebook, ukuze umntu aqale ingxoxo ngokuthumela ingxelo, emva koko abanye abantu banokujoyina uguquko ngokushiya iimpendulo.
Into oza kuhlala uyifumana kukuba abatyali mali abanamava baya kushiya uhlalutyo olunzulu lweasethi, ngendlela abacinga ukuba iyakuhamba ngayo, kwaye okona kubalulekileyo- zizizathu ezisisiseko zokuqikelela kwabo. Kwangokunjalo, uya kuhlala ufumana abantu bexoxa ngeziphumo zohlalutyo olusisiseko kunye nezobuchwephesha.
Khuphela u shishino
Ngokubanzi kwezi zinto zingasentla, singatsho ukuba isibonelelo esigqithisileyo sokujoyina iqonga lezorhwebo kukukwazi 'ukukopa urhwebo'. Ngaphandle koko kubhekiswa 'njengorhwebo oluzenzekelayo' okanye 'ukuthengisa isipili', inkqubo ikuvumela ukuba ukope urhwebo lwabanye abasebenzisi.
Umzekelo, masithi umtyali mali kule ndawo unerekhodi ephawulekayo ekuthengeni nasekuthengiseni izitokhwe zaseMelika. Ufuna ukubeka urhwebo olufanayo njengabo, ngokulinganayo kwimali onokuyifumana. Ungakufezekisa oku ngokucofa iqhosha kwiisayithi zokuthengisa zentlalo, kwaye kwiimeko ezininzi-awuyi kuhlawuliswa nantoni na eyongezelelweyo.
Makhe sijonge umzekelo wendlela ikopi yokurhweba esebenza ngayo.
1. Fumana uMrhwebi Onqwenela Ukukhuphela
Izibuko lakho lokuqala lokufowuna kukufumana umrhwebi oyithandayo inkangeleko yakhe. Ngamaqonga aphambili kurhwebo lwentlalo i-eToro ngoku ibamba ngaphezulu kwe-12 yezigidi zabarhwebi, kuya kufuneka wenze uphando olunzulu. Ngethamsanqa, unokunciphisa ngokulula ukukhangela usebenzisa izihluzi.
Ezinye zeemetrikhi ekufuneka ujonge kuzo zezi:
Iimpahla Jonga ukubona ukuba zeziphi iiasethi umsebenzisi agxile kuzo. Umzekelo, ngaba bathenga isitokhwe kuphela, okanye bayathanda ukuthatha indlela eyahlukeneyo yotyalo-mali?
Ixesha kwiQonga: Uya kufuna ukugxila kubarhwebi abanerekhodi ekuma ixesha elide lokwenza inzuzo engaguqukiyo. Kananjalo, ngenxa yokuba umrhwebi efumene iidigithi eziphindiweyo kwinyanga yokuqala yokuzama, oku akuthethi ukuba kufuneka ubakope. Endaweni yoko, khetha abarhwebi abebesebenza kwindawo kangangeminyaka eliqela.
Iinzuzo: Ngokuqinisekileyo, kuya kufuneka uphinde uvavanye ukuba uphumelele kangakanani na umrhwebi. Indlela efanelekileyo yokulinganisa oku kukujonga kwiitshathi zenyanga. Oku kukuvumela ukuba ubone ukuba yeyiphi inzuzo kunye nelahleko eyenziwe ngumrhwebi kwinyanga nganye ukusukela oko wajoyina indawo. Okukhona iinyanga 'eziluhlaza' zingcono.
Umngcipheko: Amaqonga orhwebo entlalontle afana ne-eToro abela umngcipheko kumsebenzisi ngamnye. Olu ke luvavanyo oluzenzekelayo olusekwe kwiindidi zorhwebo ezenziwa ngumntu lowo, ecaleni kwesixa abasibambayo ngokunxulumene nebhalansi yeakhawunti. Ukuxhamla kuya kudlala indima. Kungcono ukuba ungathembeli kuphela kwinqanaba lokuchazwa kwangaphambili komngcipheko. Endaweni yoko, jonga umngcipheko opheleleyo womrhwebi ngokujonga iimetwork ezichazwe ngaphambili.
Inani labarhwebi beKopi: Ukuhlala kungakhathalelwanga, kuluncedo ukubona ukuba bangaphi abasebenzisi kwindawo ekopa umrhwebi ekuthethwa ngaye. Nangona ingeyiyo inzululwazi ngqo, abarhwebi abanolulandelayo ngokubanzi benza njalo kuba bahlala bezuza. Oku kukwafaka uxinzelelo olongezelelekileyo kumrhwebi, njengoko abantu bebalandela, kokukhona bejongene nemali.
2. Khetha iStake sakho
Nje ukuba ufumene umrhwebi onqwenela ukukopa, kuya kufuneka ke uvavanye ukuba unqwenela ukubambisa malini. Amaqonga orhwebo entlalontle asebenzisa inkqubo esekwe ngokulinganayo, oko kuthetha ukuba inani lakho lilonke liya kulinganiselwa ngokufanayo nepotifoliyo oyikhuphelayo.
Masithi ufuna ukukopa umrhwebi onesitokhwe esi-5 kwiphothifoliyo yakhe
Ukugcina izinto zilula, siza kuthi urhwebo lwabele i-100 yeedola kwii-4 x zestokhwe ezahlukeneyo, kunye ne- $ 600 kwisitokhwe esi-1 x.
Oku kuthatha ipotifoliyo iyonke ukuya kwi- $ 1,000
Nangona kunjalo, ufuna ukubiza i-100 yeedola- efikelela kwi-10% yexabiso leepotifoliyo
Kananjalo, iphothifoliyo yakho iya kuba nee-4 x zesitokhwe kwi- $ 10, kunye ne-1 x yesitokhwe kwi- $ 60.
Njengoko ubona koku kungasentla, wanikwa ukhetho lokukopa yonke ipotifoliyo ngonqakrazo olunye. Ngapha koko, kuya kufuneka ukhethe nokuba ufuna ukutyala imali engakanani - kunye nothengiso lubekwe kumlinganiso ofanayo nalowo ubuphethe.
Ngale nto ithethwayo, awunyanzelekanga ukuba ukope iphothifoliyo yangoku ukuba awufuni. Endaweni yoko unokukhetha ukukopa yonke imisebenzi yexesha elizayo. Ngenye indlela, unokukhetha zombini.
3. Ukuqonda iinzuzo zakho
Nakuphi na ukuzuza okwenzayo ngokulandela omnye umsebenzisi wentengiso uza kujonga umntu omkhuphelayo. Umzekelo, masithi ngaphezulu kwenyanga kaJulayi 2020, umrhwebi wenza inzuzo ye-4%.
Nokuba uthengise malini umrhwebi, inzuzo ye-4% ibalwa ithelekiswa nobukhulu be akho ipotifoliyo. Ukuncamathela kumzekelo ofanayo njengasentla, oku kuthetha ukuba ikopi yakho yeepotifoliyo yokurhweba iya kwenza $ 100 inzuzo ngoJulayi 4.
Nangona kunjalo, ngaphandle kwengeniso emiselweyo ngohlobo lwesahlulelo okanye intlawulo yekhuphoni, uyakuqonda kuphela inzuzo yakho ukuba uqhubeka nokuvala urhwebo. Ukuba umthengisi ikopi akazenzi ngokwabo, kuya kufuneka uyenze ngesandla.
4. Isicwangciso-qhinga esingafaniyo
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga neendawo zentengiso zentlalo ezinje nge-eToro linani elikhulu labasebenzisi abasebenzayo. Oku kuthetha ntoni kuwe kukuba uya kuba namawaka abathengisi abanenzuzo ukuba bakope.
Unoko engqondweni, oku kukuvumela ukuba wenze iphothifoliyo eyahlukeneyo yabathengisi bekopi. Ngokwenza njalo, uya kuma elona thuba lilungileyo lokuzikhusela kumrhwebi onenyanga eyintlekele.
Olona phawu lubaluleke kakhulu lokuzibandakanya kwisicwangciso sokurhweba ngokwasentlalweni esizenzekelayo kukuba lonke uhla lotyalo-mali alwenzi nto. Oku kuthetha ukuba ume ethubeni lokufumana umvuzo ekupheleni kwenyanga nganye, ngaphandle kokufuna ukwenza nawuphi na umsebenzi onzima. Endaweni yoko, konke okufuneka ukwenze kukukhetha ukuba ngabaphi abathengisi onqwenela ukukopa, kunye neqonga lokuthengisa kwezentlalo elinakekela okunye.
Izibonelelo zokuba yiGugu loRhwebo loLuntu
Ngelixa sijolise kwizibonelelo zamaqonga orhwebo ekuhlaleni ngokwembono yomtyali mali omtsha, yintoni ekuyo kwabo banezakhono zorhwebo ezihambele phambili? Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ubuya kukwazi ukuqhuba ngokungaphaya kweemarike ezibanzi, ngaba ungafuna ukuba wonke umntu azi ukuba yeyiphi iSosi yakho eyimfihlo?
Ewe, abathengisi abanamava baya kuba nakho ukwenza ingeniso eyongezelelweyo xa bevumela abanye abantu ukuba bakhuphele urhwebo lwabo. Kwiimeko ezininzi, iqonga lokuthengisa kwezentlalo liya kuhlawula ikhomishini kumrhwebi xa kufikelelwa amanyathelo athile. Oku ikakhulu kumanani abasebenzisi abakopa umrhwebi, kunye nomthamo weempahla eziphantsi kolawulo (AUM).
Umzekelo, masithi umrhwebi unabantu abali-100 ababakopishayo, kwaye ipotifoliyo nganye ixabisa i-1,000 100,000 leedola. Oku kuthetha ukuba i-AUM iyonke ifikelela kwi- $ 1. Ukuba indawo yentengiso yentlalo ihlawula ikhomishini ye-1,000%, oku kufikelela kwi- $ XNUMX eyongezelelweyo.
Ngokusesikweni, umrhwebi ufumana ingeniso eyongezelelweyo ngokwenza oko bebeza kukwenza, kunjalo ke imeko yokuphumelela kuwo onke amaqela abandakanyekayo.
Iingcebiso zokwenza imali kwindawo yokuThengisa
Ukuba uyasithanda isandi sokurhweba ngokwasentlalweni, kodwa awazi ukuba ungaqala ngaphi, apha ngezantsi uza kufumana iingcebiso eziluncedo malunga nendlela yokuzinika elona thuba libalaseleyo lokwenza imali.
Cwangcisa ezinye iiparameter
Xa kuziwa ekufumaneni abathengisi abanenzuzo ukuba bakope, kubalulekile ukuba usete ezinye iiparameter. Ngale nto, sithetha ukuba kuya kufuneka uchithe ixesha ucinga malunga nokuba zeziphi ezona mfuno zincinci ulindele ukuba umrhwebi ahlangabezane nazo. Umzekelo, inqaku lokuqala elifanelekileyo kukujonga kuphela abathengisi abanerekhodi yomkhondo yonyaka omnye ubuncinci.
Ukuze uqiniseke ngokwenene ukuba iziphumo zomrhwebi ayisiyonto inethamsanqa, unokufuna ukuyinyusa le nto ukuya kwiminyaka emibini. Ipharamitha eyongezelelweyo onokufuna ukujonga kuyo ngumngcipheko womrhwebi. Ngelixa unokujonga iiprofayili zomngcipheko ophantsi ukuya phakathi, unokufuna ukuhlala kude nezo ziwela phantsi komngcipheko omkhulu.
Kuya kufuneka ke ucinge malunga neendidi zeeasethi onqwenela ukuzifumana. Umzekelo, ngenxa yokuba umsebenzisi enze iidigital zokufumana i-Bitcoin kunye Ethereum Kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo, ukuba awuziva ukhululekile ukutyala imali kwi-cryptocurrensets; sukuyenza.
Ngapha koko, abanye benu banokuba nomdla ngakumbi kwiiasethi ezivelisa ingeniso- ezinje ngesahlulo esihlawula izabelo okanye iibhondi. Ukuba kunjalo, jonga kubarhwebi bezentlalo ababambe iiasethi ezinengeniso-mali.
Ukwahlula phakathi kwabaThengisi abaninzi kwaye Iiklasi zeeasethi
Nangona besikhe sathetha ngokufutshane ngokwahluka ngaphambili, asinakugxininisa ngokwaneleyo ukuba kubaluleke kangakanani oku. Ngapha koko, uyacetyiswa ukuba uhlukanise kubarhwebi abaninzi kwaye Iiklasi zeeasethi. Malunga neyangaphambili, kufanelekile ukukopa ukurhweba kwabasebenzisi abaninzi abohlukeneyo.
Ngale ndlela, ukuba umsebenzisi omnye okanye ababini banenyanga embi - kodwa abanye bagqibezela ngenzuzo, kusenokwenzeka ukuba useluhlaza. Kwaye okokugqibela - ngokuxhasa abarhwebi abaziingcali kuluhlu olupheleleyo lweeklasi ezahlukeneyo ze-asethi, oku kuya kwandisa ngakumbi isicwangciso sakho sokwahlukana. Umzekelo, oku kunokubandakanya izitokhwe, ETFs, iibhondi zikarhulumente, kunye Iimpahla.
Kukwafanelekile ukucinga ngokudala iphothifoliyo enobunzima babathengisi bekopi. Umzekelo, abanye abathengisi baya kusebenzisa indlela engama-70/20/10 emngciphekweni. Kulapho i-70% yepotifoliyo yakho isekwe kubarhwebi abanamanqaku anomngcipheko ophantsi, ama-20% aphakathi, kunye ne-10% ephezulu.
Ukulandela le ndlela kurhwebo lwasentlalweni, uninzi lwemali yakho kubatyali mali abasemngciphekweni. Nangona kunjalo, unemali encinci oyabelwe abatyali mali abasemngciphekweni omkhulu-ngeli thuba lokuba beze kakuhle.
Uyikhetha njani indawo yokuThengisa ngeNtlalo?
Ngaba ujonge indawo entsha yokuthengisa apho unokunxibelelana kwaye urhwebe ngaxeshanye? Ukuba kunjalo, singacebisa ukuba silandele ezi ngcebiso zichazwe ngezantsi.
Eyona metric ibalulekileyo ekufuneka uyivavanye kukuba ingaba indawo yentengiso yentlalontle inelayisensi okanye hayi. Emva kwayo yonke loo nto, uya kucelwa ukuba ufake imali yokwenyani eqongeni, ke kubalulekile ukuba ukhuseleke ngomzimba omnye. Umzekelo, indawo ekhokelela kurhwebo kwezentlalo i-eToro inelayisensi ngabalawuli e-UK, Australia naseCyprus- ke imali yakho ikhuselekile ngalo lonke ixesha.
Kuya kufuneka ukhethe indawo yentengiso yentlalo exhasa indlela oyithandayo yokuhlawula. Nokuba yidebhithi / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet, okanye iakhawunti yebhanki-qiniseka ukuba uyayikhangela le ngaphambi kokungena
Ukuba ujoyina indawo yokurhweba kuba unqwenela ukunika ikopi urhwebo, qiniseka ukuba iqonga liyi-100% elubala. Ngamanye amagama, xa ujonga ukusebenza komrhwebi ocinga ukukopa, kuya kufuneka ukwazi ukujonga urhwebo ngalunye abalwenzileyo.
✔️ Ingxelo elula
Ngaphezulu kwe-100% ebonakalayo, kuya kufuneka ukhethe indawo yokuthengisa eluntwini ekuvumela ukuba ujonge amanani ngendlela efundeka lula. Umzekelo, ezona ziqonga zibalaseleyo ziya kuqhekeza iziphumo zorhwebo ezantsi kwenyanga nenyanga. Ngale ndlela, uya kubona ukuba ihambelana njani i- ikopi Umrhwebi ekuthethwa ngaye ngulo.
Ungalibali, uza kuthengisa iiasethi zehlabathi lokwenyani, ke qiniseka ukuba ujonge ukuba zingaphi izixhobo zemali oza kuba nakho ukufikelela kuzo. Emva kwayo yonke loo nto, ufuna ukwenza ipotifoliyo eyahlukeneyo yabathengisi bekopi, ke uya kufuna ukufikelela kwiiklasi ezininzi zeaseti kangangoko.
Imali kunye neeKhomishini
Ayisiyomfuneko kuphela yokuba uthathe iifizi zokurhweba kwiakhawunti, kodwa unokuhlawuliswa ngokusebenzisa ikopi yokuthengisa. Kwimeko ye-eToro, awuyi kuhlawula nayiphi na imirhumo ukuze ubonakalise urhwebo lwabanye abasebenzisi. Nangona kunjalo, uninzi lweendawo zentengiso zentlalo ziya kukuhlawulisa ikhomishini xa ukopa urhwebo, ke qiniseka ukujonga oku.
Eyona ndawo yokuRhweba ngeNtlalo ye2022
Njengesandi sentengiso yoluntu, kwaye unqwenela ukuqalisa ngeakhawunti ngoku? Ukuba kunjalo, uyakufumana iqonga lethu elineziphumo eziphezulu ezidweliswe ngezantsi.
Isishwankathelo, imeko yentengiso yentlalo ithathe indawo yotyalo-mali kwintengiso ngeminyaka edlulileyo. Ngexesha elingelilo elidlulileyo, abathengisi abakwi-Intanethi banokujolisa kwiimveliso zabo kuhlobo oluthile lomtyali mali. Izinto zitshintshile kakhulu ukusukela ngoko, ngenani lamaqonga ngoku kulandela iinqununu ezifanayo kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni ezinjengeFacebook neTwitter.
Oku kuhle ukuba ungumrhwebi we-newbie, njengoko ufikelela kubutyebi bolwazi kwindawo ebonakalayo. Kwangokunjalo, ufumana ithuba lokufumana umvuzo ngokwenza isibuko kuthengiso lwabanye abasebenzisi. Ngale nto ithethiweyo, kuya kufuneka wenze umsebenzi wasekhaya kumrhwebi ngaphambi kokubeka emngciphekweni imali yakho.
Ekugqibeleni, ukuba uyafuna ukufumana ukuba kunjani ukurhweba ngokwasentlalweni, sinethemba lokuba isikhokelo sethu esinzulu sikuxhobisile ngalo lonke ulwazi oluza kuludinga ukuze uphumelele. Sikukhombisile kwicala leqonga lethu lorhwebo olunexabiso eliphezulu-eToro. Ngokuvula iakhawunti kunye nomthengisi, unokuba urhwebo lwentlalo kwimizuzu nje embalwa!
Nguwuphi umahluko phakathi kokurhweba ngokwasentlalweni kunye nekopi yokurhweba?
Nangona zilungelelaniswe kakhulu, zibhekisa kwizinto ezimbini ezahlukeneyo. Kwimeko yorhwebo lwasentlalweni, le yinkqubo yokuxoxa, ukuxoxa, nokunxibelelana nabanye abathengisi ngendlela kawonke-wonke - njengawe kwindawo yeendaba yoluntu njenge-Facebook. Ikopi yokurhweba-ewela phantsi kwesambulela sentengiso yentlalontle, yinkqubo yokubonisa urhwebo lwabanye abasebenzisi.
Leliphi iqonga lokurhweba eluntwini?
I-eToro lolona shishino luphambili ekuhlaleni kunye nekopi yeqonga lokuthengisa kwindawo. Kude kufike umntu okhuphisana naye ngokuthembekileyo, i-eToro iya kuqhubeka nokulawula indawo.
Ndikhetha njani umrhwebi wekopi?
Zininzi izinto ekufuneka uzithathele ingqalelo xa ukhetha umrhwebi wekopi kwisibuko. Oku kubandakanya ubude bexesha umrhwebi ebekweso siza, inzuzo yabo iyonke ngenyanga nenyanga, kunye nenqanaba lomngcipheko.
Ngaba kuya kufuneka uhlawule ukuze usebenzise iqonga lokuthengisa eluntwini?
Kwimeko ezininzi, hayi. Ungalibali, iindawo zokurhweba ekuhlaleni zisezabarhwebi abakwi-Intanethi. Kwaye benza njani abathengi kwi-Intanethi ukwenza imali? Xa uthengisa! Kananjalo, unokuvula iakhawunti kwaye ubeke imali ngaphandle kokuhlawuliswa.
Ngaba ndingarhweba ngokwasentlalweni kunye nomgangatho?
Kwiimeko ezininzi, ewe. Nangona kunjalo, oku kunokuba yinto ekhohlisayo xa unika umda kwimida esekwe kwimpahla. Umzekelo, i-ESMA caps yonyusa kwizitokhwe nakwii-cryptocurrensets ukuya kwi-5: 1 kunye ne-2: 1 ngokwahlukeneyo, ke yigcine engqondweni.
Ngaba urhwebo lwentlalo luyaphula kumalungelo am abucala
Ngokuqinisekileyo akunjalo. Nangona unokubajonga abanye abathengisi kwiqonga elifanelekileyo, ngekhe ukwazi ukujonga naluphi na ulwazi lomntu. Endaweni yoko, uya kuba nakho ukubona igama lomsebenzisi labo.
Ngaba i-eToro ihlawulisa nayiphi na imali yokukopa urhwebo?
Hayi, ukuthengisa ikopi kusimahla kwa-eToro.